Izibalo kunye neeNkcukacha zoThengiso ngo-2013 | Martech Zone
Amanani oThengiso lweSelfowuni kunye namanani
NgoLwesine, uJanuwari 2, 2014 NgoLwesithathu, nge-1 kaJanuwari 2014 Douglas Karr
Ngaba sakhankanya iselfowuni kunyaka ophelileyo? Andikwazi ukukuxelela ukuba mangaphi amawaka ezikhankanyiweyo esizenzileyo kwaye siyaqhubeka ukwenza. Okwangoku-ziipesenti ezingama-25 kuphela zeenkampani ezinesicwangciso-buchule sokuhamba… ouch. Imiyalezo ebhaliweyo, iwebhu yeselfowuni, usetyenziso lweselfowuni kunye ne-imeyile ephathekayo ziqhelekileyo kwizicwangciso zonke zentengiso. Ukuba awukhawulezisi, uphulukana nenxalenye enkulu yabaphulaphuli efuna imveliso okanye inkonzo yakho.
Amanani ayothusa - uninzi lweenkampani ziyavuma ukuba azinaso isicwangciso esilihambileyo, kwaye uqikelelo lwam kukuba abo bacinga ukuba banesicwangciso esilihambile abachazwanga. Bacinga ukuba nje ukuba ne-app okanye iwebhusayithi enobuhlobo ehambelana nesicwangciso. Ngethamsanqa iimveliso ziqala ukuba nobulumko ngezinto ezinje ngokuphendula kuyilo kunye nee -apps zewebhu ze-HTML5 vs. UNeil Bhapkar, Uberflip VP yeNtengiso.
Yongeza ezi zinto zimbini kwiPosti nganye, kwaye iBhlog yakho iya kuqhuma kuDumo